शीर्ष नेताहरूको सन्तान मोह
पद र प्रभावको आडमा आफ्नै सन्तानलाई अनुचित लाभ लिने माध्यम बनाइरहेका उच्चपदस्थ नेताहरूले आफ्नो बदनामी मात्र बढाएका छैनन्, राजनीतिलाई नै विकृत तुल्याउँदैछन् ।
स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी पुत्र प्रकाशचन्द्र भन्छन्- “बुवालाई अप्ठेरो पार्ने काम गर्नै हुन्‍न भन्‍ने लाग्थ्यो”
मलाई राजनीतिमा लाग्‍नुपर्छ वा बुवाको नजिक बसेर काम गर्नुपर्छ भन्‍ने कहिल्यै लागेन।
स्वर्गीय कीर्तिनिधि विष्‍टले छोरा विनोदलाई भन्‍ने गर्थे- ‘प्रधानमन्त्री बाबुले केही गर्देला भन्‍ने नठान्‍नू’
बुबाले कतै भनिदिनुहोला र म पनि कोलम्बो प्लानमा जाउँला भन्‍ने आशा थियो तर बुवाले वास्तै गर्नुभएन।
प्रम ओलीः विश्‍वमञ्‍चमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली १ पुसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा निस्कँदासम्म धेरैले यसबारे चासो दिएका थिएनन्। नेपाल र अमेरिकाका विदेशमन्त्रीबीच झण्डै दुई दशकपछि भेटवार्ता हुँदै थियो। वासिङटन डीसीमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका अमेरिकी समकक्षी माइकल रिचार्ड पोम्पेओबीचको भेटले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा एक किसिमको क्रमभंगता ल्याउँदै थियो।
चुनाव भारतको, चासो नेपालको
भारतका पाँच राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचन नतिजाले दिल्लीको सत्तामा मात्र होइन, नेपालमा समेत पर्न सक्ने प्रभावबारे अड्कलबाजी हुनथालेको छ।
दुई तिहाइको सकस यात्रा
आम नेपालीमा व्याप्त निराशा चिर्दै आशा जगाएको स्थिर सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि मुलुकको आर्थिक विकास मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासकै निम्ति जोखिमपूर्ण छ।
संवेदनशील मोडमा संक्रमणकालीन न्याय
१२ वर्षमा के हुन्छ ?
चर्चित नेपाली आहान छ- ‘खोलो पनि फर्किन्छ ।’
न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूको पीडाले भन्छ- ‘आँसु पनि रित्तिन्छ !’
कसरी उकास्‍ने प्रहरीको मनोबल ?
पछिल्ला घटनाक्रमबाट हतोत्साहित प्रहरी संगठनभित्र चुलिंदो भय र अन्योलको मनस्थिति मुलुकको अमनचैन र सामाजिक सुव्यवस्थाकै निम्ति घातक छ ।
अपराधीको निशानामा कलिला बालबालिका
दशक लामो हिंसाले जरैदेखि हल्लाएको राज्य र समाजका कमजोर अवयवहरूमाथि थपिएको दण्डहीनता र अराजकता अबोध बालबालिकामाथि कहालिलाग्दो अपराधको कारण बनेको छ ।
संक्रमणले शिथिल नेकपा
एमाले–माओवादी एकतापछि ‘इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी’को उपमा पाएको नेकपाभित्र संगठन, सिद्धान्त र कार्यदिशा सबैतिर अस्तव्यस्त देखिन्छ ।
सैनिक तालीममा ज्यान जाने लापरवाही
कमाण्डो तालीमका क्रममा भएको उपसेनानी शौभाग्य देउजाको मृत्यु प्रकरण नेपाली सेनामा चुलिँदो घातक लापरवाही र अव्यवस्था झल्काउने दृष्टान्त हो ।
प्रतिबन्धित लागूऔषध, गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना चिनेर विकसित मुलुकहरू धमाधम ‘गाँजा–युग’ मा फर्किरहँदा नेपालमा पनि यसलाई खुला गर्नुपर्ने बहस शुरू भएको छ ।
आधुनिक नेपालको शासन अभिलेख
पुस्तकले उजागर गरेको सबभन्दा महत्वपूर्ण अर्को पाटो छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताको पुगनपुग तीन दशक अवधिमा जम्मा २५ वटा सरकार गठन भएका छन्। जबकि, लगभग त्यति नै अवधिको पञ्चायतमा ३३ वटा सरकार फेरिए।
नेपाली सत्ता राजनीतिमा आफ्नो गुमेको स्थान फर्काउन भएको दिल्ली–दाहाल कसरत दुवैका लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।
‘गृह शासन’को जगजगी’
देशमा कानूनको शासन प्रत्याभूति गराउने अहम् जिम्मेवारीमा हुन्छ, गृह मन्त्रालय। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेतृत्व सम्हालेपछिका शृङ्खलाबद्घ कदमहरूले देखाउँछन्– यो मन्त्रालय विधि र व्यवस्थासँगै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारमाथि नै संकट बन्दैछ।
एउटा फरक इतिहास
कला रामेश्वर बोहरा
स्थापित तथ्य नै छ– इतिहास जित्नेहरुको लेखिन्छ । तथ्य अर्को पनि छ– इतिहास प्रायः (उच्च) पदमा पुग्नेहरुकै लेखिएको छ । राजनीति होस् या अर्थतन्त्र, निजामती सेवा होस् या सैन्य संगठन; उच्चपदस्थहरुकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ– इतिहास लेखन ।
स्थानीय सरकारको हबिगतः रानीपोखरीमा डुब्यो कान्तिपुरको इतिहास
विधिको शासनलाई बलियो पार्नुपर्ने स्थानीय सरकारहरूमा कतिसम्म अराजकता चुलिएको छ भन्ने बुझ्न रानीपोखरीको बर्बादी हेरे पुग्छ ।
पूर्व राजदूत केशवराज झा हत्या प्रकरणः को हुन् झा ?
४ भदौमा हत्या गरिएका काठमाडौंका रैथाने तिरहुतिया, पूर्वराजदूत झा बेग्लै उचाइ हासिल गरेका कुटनीतिज्ञ थिए ।
कहिले पाउने दण्ड ?
विधिको पालना गराउने न्यायालय र संवैधानिक अंगका प्रमुख पदाधिकारीका जगजाहेर बदनियत छानबिनको दायरामा नआउनु मुलुक संस्थागत दण्डहीनताको चंगुलमा परिसकेको प्रमाण हो ।
सेनाको साख फर्काउने परीक्षामा नयाँ सेनापति
आर्थिक–व्यापारिक रुझानले सेनाको छवि धुमिल बनिरहँदा जङ्गी अड्डाको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका पूर्णचन्द्र थापासामु मुलुकको सैनिक संगठनको व्यावसायिक साख उकास्ने प्रमुख चुनौती छ ।
राजनीतिमा शुद्धीकरणको छटपटी
डा. गोविन्द केसीको १५औं सत्याग्रहसँगै विस्फोट भएको नागरिक असन्तुष्टि स्वार्थको दलदलमा फँसेको राजनीतिमा शुद्धीकरण नहुनुको आक्रोश थियो, जसले प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता खोजिरहेको छ ।
कहाँ गयो ओली उत्साह
जन–जनमा स्थिरता र समृद्धिको आशा जगाउन सफल केपी शर्मा ओलीप्रतिको आम उत्साह प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महीनामै धर्मराउन थालेको छ ।
भीभीआईपी सुरक्षाकाे लागि किन आउँछन् विदेशी सैनिक ?
नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा विदेशी सैन्य उपस्थितिलाई लिएर संसदमा समेत हंगामा हुन्छ, तर त्यसको भित्री पाटोमा सामान्य छलफलसम्म हुँदैन ।
आफैं‌माथि संकट निम्त्याउँदै सरकार
सहज समाधान हुने समस्यालाई पनि निहित स्वार्थवश सरकारमाथिकै संकट बनाउँदैछन्, केही मन्त्री र सत्ताारुढ दलका नेताहरू ।
जोखिमपूर्ण बाटोमा प्रादेशिक सरकार
विधि, पद्धति निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँले संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा जुटेका प्रदेश सरकारहरूलाई कमजोर मात्र होइन, अराजक बनाउँदैछ ।
टीआरसी ऐन संशोधनः संक्रमणको छटपटी
राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिपछि पनि अलपत्र रहेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन भन्दै सरकारले तयार पारेको ‘पीडितपक्षीय’ विधेयकको मस्यौदाबाट द्वन्द्वपीडित भने सशंकित छन् ।
आम निर्वाचनपछि आन्दोलनको धङधङीबाट मुक्त भएको मधेशकेन्द्रित राजनीतिले व्यावहारिक बाटो समाते पनि मधेशका असन्तुष्टिहरू असरल्ल छाडिदिएको छ।
साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धान प्रकरणले संगठित अपराध अनुसन्धानमा राज्य–संयन्त्रको हविगत उदाङ्गो पारेको छ ।
फिलिपिन्सको माओवादी युद्धः लड्दालड्दै ५० वर्ष
फिलिपिन्समा करीब ४५ हजारको ज्यान लिइसकेको माओवादी विद्रोहले ५० वर्षमा पनि गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन ।
फिलिपिन्समा लोकतन्त्रः पहिलो निशाना प्रेस
नागरिक समाज कमजोर भए लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारले नै लोकतन्त्रलाई बर्बाद पार्ने पछिल्लो उदाहरण फिलिपिन्स बनेको छ ।